Extruder Machinery Vagadziri - China Extruder Machinery Vatengesi & Fekitori
Yega / Multi -Layer Co-Extruder Kanda Embossed Firimu Line
Iyi SINGLE / MULTI-LAYER CO-EXTRUDER CAST EMBOSSED FILM mutsara yakagadzirirwa kugadzira firimu, backshet yezvinhu zvinehutsanana neLLDPE, LDPE, HDPE uye EVA.
LQ-LΦ 65/110/65 × 2350 CPE (EVA) yegiredhi kukanda firimu unit
Iyi LQ-LΦ 65/110/65 × 2350 CPE (EVA) yepamusoro giredhi yekukanda firimu unit unit muchina wekukanda une yakakwira plasticization, nyore kushanda, hupenyu hurefu hwebasa, kuchengetedza magetsi uye imwe tekinoroji yekunze, ine LDPE, LLDPE, HDPE uye Eva uye zvichingodaro pahwaro hwemakore mazhinji emidziyo yekugadzira uye kushanda chaiko kwevatengi.
LQ-80/120/80 × 2350 Yekumhanyisa otomatiki mareti matatu kana mashanu matanda akakanda anotambanudza firimu muchina une pakati winder
High chinzvimbo: kumhanya 350 M / min; kunonyanyisa goho kusvika ku12T / zuva.
Yakakwirira njere: murume-muchina interface yekubatanidza, yemagetsi kure yekutarisa inokurumidza sevhisi, yakawedzera advanced smart control system.
Yakakwirira-mhando: ina-axis yeiyo vhoriyamu, servo drive, kuburitswa kweakapedza chigadzirwa chemhando yepamusoro, inonamira, yakatambanudza, kubaya kuramba kuri nani.
Kushandiswa kwesimba yakasarudzika tsika isingaenzaniswi kuputira system, kudzikisira kwakakosha mukushandisa kwesimba.
Nyore kushandisa: munhu mumwe oparesheni, yakakosha kumhanya, tembiricha yekudzora module.
LQB-3 Maviri-nhanho Multi zvinoshanda zvizere-otomatiki Ridzai richigadzirisa Machine
Iyo Nhanhatu-nhanho Multi inoshanda Yakazara-otomatiki Ridza Kuumbwa muchina unotora wevanhu-komputa interface kudzora mashandiro ese maitiro, auto-kurodha, auto kuridza, auto kudonhedza. Action cylinders ese akaunganidzwa nemagineti induction switch.Connect ne PLC kudzora nhanho dzese uye kuyedza humburumbira.
LQAL-2 Furidzira Kuumbwa Machine
LQ AS Jekiseni-yakatambanudza-furidza kuumba muchina
Iyo AS yakateedzana modhi inoshandisa matatu-chiteshi chimiro uye yakakodzera kuburitsa midziyo yepurasitiki yakadai sePET, PETG, nezvimwewo Inonyanya kushandiswa mumapakeji emidziyo yezvizoro, zvemishonga, nezvimwe.
LQ10D-560 Ridzai richigadzirisa Machinery
UPG Ridzai richigadzirisa Machine kwakavakirwa yakarurama kukarukureta kufa mumhanyi design, riri streamlined, haana akafa angled uye anogona kuchinja ruvara nokukurumidza